Ifakwe kumbindi weSan Jacinto (iGumbi 1)
Ewe! Indlu yokulala yakwa-B@M ibonelela ngendawo yokuhlala esemgangathweni enombono weTicao Pass kunye neNtaba iBulusan yaseSorsogon. Onke amagumbi ethu anegunjana lawo, igumbi lokuhlambela, ishawari eshushu nebandayo kunye nemeko yomoya. Umgama ukusuka elwandle umalunga nezinyuko ezintlanu ukuya kwezilishumi.
Indlu yokulala yakwa-B@M yinxalenye ye-B@M’s Restobar ivula yonke imihla ukususela ngentsimbi yesi-8am ukuya kweye-12mn. Sinendawo yokuphola kancinci yeendwendwe zethu ezijonge elwandle. Iphelele kwikofu yabo yasekuseni ngelixa bejonge ukuphuma kwelanga.
Sinamagumbi amane xa ewonke. Igumbi loku-1 linebhedi ephindwe kabini. Igumbi lesi-2 linebhedi enye. Igumbi lesi-3 linebhedi ephindwe kabini. Igumbi lesi-4 linebhedi elingana nokumkanikazi kunye nejacuzzi kunye neterrace encinci. Umatrasi owongezelelweyo ziyafumaneka xa uceliwe kunye nentlawulo eyongezelelweyo.
Sibekwe kumbindi wedolophu. Sikubumelwane beentsapho zasekuhlaleni, isikhululo samapolisa, iholo kamasipala, indawo yokuphumla, isikolo kunye necawe eya kukunika amava ayinyaniso. Ulwandle olukufutshane yimizuzu emi-5 yokuqhuba isithuthuthu.
Umnikazi uMichelle okanye abasebenzi uRebecca ujikeleze ukunceda ngayo nayiphi na into efunwa ziindwendwe zethu. Sinokucwangcisa imisebenzi eyahlukeneyo efana ne-Scuba diving (imitha ye-Manta kunye ne-Whale sharks), i-Island hopping kunye ne-Snorkeling kunye nokutyelela iingxangxasi ezifihliweyo zeSiqithi.
Umnikazi uMichelle okanye abasebenzi uRebecca ujikeleze ukunceda ngayo nayiphi na into efunwa ziindwendwe zethu. Sinokucwangcisa imisebenzi eyahlukeneyo efana ne-Scuba diving (imit…